UWiko Tommy 3, uLenny 5 noJerry 3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Eyona nto inomdla nge-MWC 2018 kukuba isishiya sineendidi ezininzi ngokweefowuni. Kuba sijamelene nazo zonke iintlobo zeemveliso ezikhoyo kumnyhadala owaziwayo e-Barcelona. Ke kuyo yonke le mihla sizifumana kwezona ndawo zisemgceni wokusika ukuya kuthi ga Isiphelo esisezantsi nge-Android Go njengenkqubo yokusebenza. Ngoku kukujika kweemodeli ezintathu zoluhlu lokugqibela, Zonke zisuka eWiko.
Umenzi ukwakhona kumsitho odumileyo. Sele ivelise iifowuni zayo ezintathu ezisezantsi, Zonke zisebenza nge-Android Go. Amagama abo ngo UTommy 3, uLenny 5 noJerry 3 kwaye sele siyazazi iinkcukacha zayo. Siza kukuxelela apha ngezantsi.
KuWiko, uluhlu olusezantsi alunyanzelekanga ukuba lube mgangatho ongaphantsi okanye ngeenkcukacha ezishiya kunqweneleka. Umenzi waseFrance ufuna ukutshintsha umfanekiso wesiphelo esisezantsi sabasebenzisi abaninzi ngezi UTommy 3, uLenny 5 noJerry 3. Kuba sijongane neefowuni ezinokubalula ngaphezu kwezixazululo. Sithetha ngemodeli nganye nganye.
1 UWiko Tommy 3
2 UWiko Jerry 3
3 UWiko Lenny 5
UWiko Tommy 3
Sidibana phambi embindini weemodeli ezintathu uphawu luye lwazisa. Sisixhobo esabelana ngeenkcukacha zeefowuni ezimbini ezithiwe nguWiko kule MWC 2018. Isebenza nge-Android Go kwaye ine-18: 9 screen. Ke siyayibona indlela uyilo olubaluleke ngayo kuluhlu lokungena. Oku kukucaciswa kwayo:
Ukucaciswa kobuchwephesha iWiko Tommy 3
Umzekelo Unyana 3
Inkqubo yokusebenza Ushicilelo lwe-Android Go Oreo
Isikrini 5.45 intshi IPS ine-18: 9 ratio kunye nesisombululo 960 x 480 pixels
Inkqubo I-Quad Core Cortex A53 1.3 Ghz
Ukugcinwa kwangaphakathi I-16GB (yandiswa ukuya kuthi ga kwi-128GB)
Ikhamera esemva 8 MP
Ezinye izinto NFC
Ixabiso Malunga ne-100 euro
UWiko Jerry 3
Kwindawo yesibini sifumana eyona modeli incinci kwezi zintathu ukuba umenzi waseFrance uzisile. Ikwayeyona inexabiso eliphantsi kuzo zonke. Nangona ifemi ingakhange ilukhethe ngenxa yeenkcukacha zayo. Oko sidibana kwakhona nefowuni oko Inesikrini se-18: 9 kunye ne-Android Go Oreo Edition njengenkqubo yokusebenza. Le yinkcazo yeWiko Jerry 3:
Ukucaciswa kobuchwephesha uWiko Jerry 3
Umzekelo UJerry 3
Isikrini I-5.45 intshi IPS ine-18: 9 ratio kunye ne-960 x 480 resolution
Inkqubo I-Quad Core Cortex A7 1.3 Ghz
GPU IMali 400MP2
Ukugcinwa kwangaphakathi I-16GB (yandiswa ukuya kuthi ga kwi-64GB)
Ikhamera esemva 5 MP
Ixabiso 79 euro
UWiko Lenny 5
Kwindawo yesithathu sifumana olona hlobo lukhulu lwebhrendi. Inescreen esikhudlwana kunaleso sabantakwabo babini. Ukongeza kokufumana iinkcukacha ezongezelelweyo. Umzekelo a ibhetri enkulu kunye nefleshi kwikhamera yangemva. Ngaphandle koko, ukucaciswa kwayo kugcina ukufana okuthile kunye nezinye iimodeli. Kwaye iscreen se-18: 9 siyabuya ukwenza ukubonakala. Ezi zezi Ukucaciswa kukaWiko Lenny 5:
Ukucaciswa kobuchwephesha uWiko Lenny 5
Umzekelo ULenny 5
Isikrini 5.7 intshi IPS ine-18: 9 ratio kunye ne-1440 x 720 resolution
Ikhamera esemva 5 MP + Ifleshi
Ezinye izinto Izithethi zestiriyo
Ibhetri 2.800 mah
Ixabiso Malunga ne-euro ezingama-100
Ngelo xesha Akukho nto ikhankanyiweyo malunga nomhla wokukhutshwa kwayo nayiphi na le mizekelo mithathu. Ke kule ngqiqo kuya kufuneka silinde isiqinisekiso esithile kwinkampani. Sinethemba lokuva kuwe kungekudala, kodwa asazi ukuba olu lwazi luya kukhutshwa nini. Kodwa siya kuzimamela naziphi na iindaba malunga noku.
Malunga namaxabiso, zombini uLenny 5 kunye noTommy 3 baya kuba malunga ne-100 euro. Mhlawumbi enye ingezantsi nje kwaye enye ingaphezulu nje kwe-100 euro. Nangona ixabiso lokugqibela eliza kuba nalo iifowuni ezimbini alaziwa. Kodwa eli nani lisebenza njengesikhokelo. Kwimeko kaJerry 3 ixabiso liya kuba ngama-euro angama-79. Kubonakala ngathi eli xabiso liqinisekisiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » UWiko Tommy 3, uLenny 5 noJerry 3: Isiphelo esisezantsi sophawu nge-Android Go